Wasaaradda Amniga Oo Shaacisey Khasaaraha Ka Dhashay Weerarkii Hotel Dayax – Goobjoog News
Wasaaradda Amniga Oo Shaacisey Khasaaraha Ka Dhashay Weerarkii Hotel Dayax
Wasaaradda amniga xukuumadda Soomaaliya ayaa ka hadashay khasaaraha ka dhashay weerarkii qaraxyada iyo dagaalka tooska ahaa ee isugu jirey, kaasi oo gelinkii hore ee maanta lagu qaadey Hotelka Dayax ee magaalada Muqdisho.
Wasiirka wasaaraddaasi C/risaaq Cumar Maxamed ayaa sheegay in weerarkii maanta ay ku dhinteen 10 qof, halka 51 kalena ay ku dhaawacmeen.
Waxa uu wasiirka xaqiijiyey in ragga weerarka kusoo qaadey hotelka ay tiradoodu ahayd Afar, isaga oo tilmaamay in ciidanka amniga ee dowladda Federaalka ay dhammaan raggaasi toogteen.
Sidoo kale wasiirka ayaa ku bogaadiyey ciidamada amniga sida ay usoo af jareen howlgalkaan oo uu sheegay in waqti badan aaney ku qaadan.
Mas’uuliyadda weerarkii hotel Dayax waxaa sheegatay Xarakada Al-shabaab, waxaana ay ku sheegeen qoraal ay baraha Internetka ku leeyihiin soo dhigeen iney gaareen hadafkii laga lahaa.
Weerarkaan ayaa ku bilowday qarax aad u xoogan oo loo adeegsaday gaari, waxaana raggan ka tirsan Al-shabaab markii ay gudaha hotelka galeen hadane dhacay qarax Labaad oo waxyeello soo gaarsiiyey wariyeyaal howlahooda shaqo ku guda jirey.
Dadka dhintey waxaa ku jirey Labo Malaaq oo kasoo jeeday K/galbeed kana mid ahaa waxgaradkii 135 oday dhaqameed.
Sidoo kale waxay waxyeellada ugu badan soo gaartay dad shacab ah oo qaarkood halkaasi ku ganacsanayey, qaar wadada marayey iyo sidoo kale dad kale oo lama filaan halkaasi dhacdadan ugu qabsatey.
Dhaawacyadii ugu badnaa ee ka dhashay weerarkaan waxaa la geeyey Isbitaalka weyn ee Madiina.
2-dii bishan ugu yaraan 10 qof ayaa ku geeriyootey kadib markii Al-shabaab ay Labo qarax ku weerareen Hoteelka Peace ee magaalada Muqdisho.
Indha Cadde: Waan soo dhoweynayaa hub ka dhigista ka socota Muqdisho
Wxrzav pxfxns Best price cialis cialis black
Rgrmjf zapfxy cheap generic viagra online buy generic cialis online
Zpayfb vvgrph ed pills when does cialis go generic
Byvjxb lwzytd canadian online pharmacy Pbjva
Kaydka Goobjoog Select Month August 2020 (117) July 2020 (352) June 2020 (511) May 2020 (307) April 2020 (264) March 2020 (227) February 2020 (211) January 2020 (171) December 2019 (174) November 2019 (153) October 2019 (168) September 2019 (169) August 2019 (238) July 2019 (230) June 2019 (233) May 2019 (236) April 2019 (172) March 2019 (195) February 2019 (173) January 2019 (249) December 2018 (261) November 2018 (235) October 2018 (297) September 2018 (366) August 2018 (329) July 2018 (310) June 2018 (295) May 2018 (348) April 2018 (366) March 2018 (358) February 2018 (421) January 2018 (616) December 2017 (337) November 2017 (356) October 2017 (360) September 2017 (323) August 2017 (399) July 2017 (309) June 2017 (360) May 2017 (411) April 2017 (429) March 2017 (394) February 2017 (391) January 2017 (455) December 2016 (424) November 2016 (486) October 2016 (595) September 2016 (421) August 2016 (479) July 2016 (344) June 2016 (359) May 2016 (332) April 2016 (327) March 2016 (373) February 2016 (350) January 2016 (313) December 2015 (266) November 2015 (278) October 2015 (372) September 2015 (408) August 2015 (441) July 2015 (445) June 2015 (468) May 2015 (456) April 2015 (7) March 2015 (7) February 2015 (10) January 2015 (155) December 2014 (627) November 2014 (639) October 2014 (400) September 2014 (351) August 2014 (294) July 2014 (203) April 2014 (1) January 2014 (1) December 2013 (1) November 2013 (1) September 2013 (1) May 2013 (1) July 2012 (1) July 2011 (1) June 2011 (2) May 2011 (1) February 2011 (1) November 2010 (1) February 2010 (1)
All our writers have worked for more than thousands of assig...
januvia generic http://lm360.us/...
order cialis online http://cialisoni.com/...